Visakha Foundation Visakha – Visakha Foundation
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဒေသ၊ လူမျိုးဘာသာမရွေး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား မိဘမဲ့ ကလေးလူငယ်များအတွက် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စားဝတ်နေရေး၊လူမှုရေးနှင့် ဘက်စုံဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး များကို ရည်ရွယ် ၍ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိရေး ပံ့ပိုး မှု အစီအစဉ်များ။
အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံသင်တန်းကျောင်းအား ရွေးချယ်ရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်း (၁) တရားဝင် သင်တန်းဖွင့်ခွင့် ရရှိထားသောဆေးရုံဖြစ်ခြင်း။ (၂) သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ထားသည်မှာ ကြာရှည်ပြီဖြစ်ခြင်း။ (၃) ယုံကြည်စိတ်ချ၊ ခိုင်မာသော သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်း။Read More
Dress Making (helper)
VISÃKHÃ FOUNDATION has Three Types of Membership.
Permanent Member အမြဲတမ်းအသင်းဝင်
Annual Member နှစ်စဉ် အသင်းဝင်
Associate Member တွဲဖက် အသင်းဝင် (သို့မဟုတ်) သင်္ဂဟအသင်းဝင်
အသင်းဝင်များအားလုံးသည် စိတ်တူ၊ ကိုယ်တူ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ တူညီ၍ ပရဟိတစိတ်ဓါတ် ထက်သန်သူများသာ ပါဝင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဝိသာခါ Foundation ၏ COVID 19 တတိယလှိုင်းတွင် Oxygen Plant လှူဒါန်းခြင်း စတုတ္ထခြေလှမ်း
m ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nenatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
သင္တန္းသားolore magnam aliquam quaerat voluptatem.Neque porro quisolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi te quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi te